သူဟာ ကိုယ့်အတွက်ချစ်သူကောင်းဟုတ်မဟုတ် ရန်ဖြစ်တဲ့အခါ ဒီအချက်တွေနဲ့တိုက်ကြည့်ပါ…❤️ – Trend.com.mm
သူဟာ ကိုယ့်အတွက်ချစ်သူကောင်းဟုတ်မဟုတ် ရန်ဖြစ်တဲ့အခါ ဒီအချက်တွေနဲ့တိုက်ကြည့်ပါ…❤️
ဘယ်လိုပြဿနာမျိုးမှာမဆို ဖြေရှင်းနည်းမျိုးစုံရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ချိုချိုသာသာသဘောပေါက်အောင်ဖြေရှင်းတာနဲ့ ဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ဆဲဆိုဖြေရှင်းတာမျိုးမှာ သင်ဆိုရင်ရော ဘယ်အရာကိုပိုပြီးလိုချင်ပါသလဲ? သေချာပေါက် ချိုချိုသာသာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပြီးသွားမယ့်ဖြေရှင်းနည်းမျိုးပဲ
ချစ်သူရည်းစားတိုင်းလိုလို ရန်မဖြစ်ကြဘူးရယ်လို့မရှိပါဘူး။ရန်ဖြစ်ကြတာပါပဲ။ပြီးရင်လည်း ပြန်ပြီးပြေလည်သွားကြရော။ကွာတာက ရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ သင့်ချစ်သူက သင်တစ်ဘ၀လုံးအတွက်ရည်မှန်းထားတဲ့ချစ်သူက သင့်အပေါ်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဆိုတာပါပဲ။ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုကတည်းက တစ်ယောက်ယောက်ကမှားနေလို့၊နှစ်ယောက်ကြားမှာနားလည်မှုလွဲနေလို့ပါ။ဒါကို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချိန်ညှိပြီးဖြေရှင်းမှ ပြေလည်မှာမဟုတ်လား။
အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲသင့်ချစ်သူက ရန်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း ဒီအချက်တွေကို အမြဲတမ်းလိုလိုလုပ်တယ်ဆိုရင် သူက သင်နဲ့ရေရှည်အဆင်ပြေမယ့်အလားအလာမရှိပါဘူး။ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ် ကိုယ့်ဘ၀ကိုလုံခြုံအေးချမ်းမှုပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးကိုပဲ ပျိုမေတို့အနေနဲ့ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။သင့်ချစ်သူက ရန်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း ဒီအချက်တွေထဲကတစ်ချက်ချက်ကိုအမြဲလုပ်နေတတ်သလား?
*ရန်ဖြစ်နေတုန်း စကားများနေတုန်း ဆက်မပြောချင်တော့ဘူးဆိုပြီးသင့်ကိုထားပြီးထွက်သွားတယ်။
*သင်လုပ်ခဲ့တဲ့အမှားအတွက် သူခံစားရသလို သင့်ကိုပြန်ပြီးသိမ်ငယ်ခံစားရအောင်လုပ်တယ်
*သင်ပြောသမျှ သင်ဖြေရှင်းသမျှကို လှောင်ရယ်ရယ်တယ်
*သူတို့ရဲ့ အမှားကို တာဝန်မယူ မဖြေရှင်းပဲ ဘာသိဘာသာနေတယ်
*ရန်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း သင်နဲ့ချစ်သူဖြစ်ရတာပဲနောင်တရသလိုလို၊သင်က တန်ဖိုးမရှိသလို ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်တယ်
*ရန်ဖြစ်တိုင်း လက်ပါတတ်တယ်။ပြီးမှ ပြန်တောင်းပန်တယ်
ဒီလိုအချက်တွေထဲက တစ်ချက်ချက်များ သင့်ချစ်သူက သင့်အပေါ်အမြဲပြုမူနေတယ်ဆိုရင် သင်တို့ရဲ့ အချစ်ရေး ရှေ့ဆက်ဖို့ကိုသေချာစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။သင့်ချစ်သူက ဒီလိုမျိုးအချက်တွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ သင်က ကံကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါပဲ။ကိုယ့်အပေါ်တကယ်ချစ်တဲ့သူ၊တကယ်နားလည်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူဆိုတာ ရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတောင် ကိုယ်နားလည်လက်ခံလာတဲ့အထိပြောပြရှင်းပြတဲ့သူမျိုး၊သူတို့မှားရင်လည်းကိုယ်ကျေနပ်တဲ့အထိ တောင်းပန်ရှင်းပြတာမျိုးပါ ❤️
ဘယျလိုပွဿနာမြိုးမှာမဆို ဖွရှေငျးနညျးမြိုးစုံရှိပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ခြိုခြိုသာသာသဘောပေါကျအောငျဖွရှေငျးတာနဲ့ ဒေါသတကွီးအျောဟဈဆဲဆိုဖွရှေငျးတာမြိုးမှာ သငျဆိုရငျရော ဘယျအရာကိုပိုပွီးလိုခငျြပါသလဲ? သခြောပေါကျ ခြိုခြိုသာသာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပွီးသှားမယျ့ဖွရှေငျးနညျးမြိုးပဲ
ခဈြသူရညျးစားတိုငျးလိုလို ရနျမဖွဈကွဘူးရယျလို့မရှိပါဘူး။ရနျဖွဈကွတာပါပဲ။ပွီးရငျလညျး ပွနျပွီးပွလေညျသှားကွရော။ကှာတာက ရနျဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာသငျ့ခဈြသူက သငျတဈဘဝလုံးအတှကျရညျမှနျးထားတဲ့ခဈြသူက သငျ့အပျေါဘယျလိုတုံ့ပွနျလဲဆိုတာပါပဲ။ရနျဖွဈတယျဆိုကတညျးက တဈယောကျယောကျကမှားနလေို့၊နှဈယောကျကွားမှာနားလညျမှုလှဲနလေို့ပါ။ဒါကို တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ခြိနျညှိပွီးဖွရှေငျးမှ ပွလေညျမှာမဟုတျလား။အဲ့ဒီလိုမဟုတျပဲသငျ့ခဈြသူက ရနျဖွဈတဲ့အခါတိုငျး ဒီအခကျြတှကေို အမွဲတမျးလိုလိုလုပျတယျဆိုရငျ စိတျမကောငျပါဘူး။သူက သငျနဲ့ရရှေညျအဆငျပွမေယျ့အလားအလာမရှိပါဘူး။ဘယျလောကျပဲခဈြခဈြ ကိုယျ့ဘဝကိုလုံခွုံအေးခမျြးမှုပေးနိုငျတဲ့သူမြိုးကိုပဲ ပြိုမတေို့အနနေဲ့ရှေးခယျြသငျ့ပါတယျ။
သငျ့ခဈြသူက ရနျဖွဈတဲ့အခါတိုငျး ဒီအခကျြတှထေဲကတဈခကျြခကျြကိုအမွဲလုပျနတေတျသလား?
*ရနျဖွဈနတေုနျး စကားမြားနတေုနျး ဆကျမပွောခငျြတော့ဘူးဆိုပွီးသငျ့ကိုထားပွီးထှကျသှားတယျ။
*သငျလုပျခဲ့တဲ့အမှားအတှကျ သူခံစားရသလို သငျ့ကိုပွနျပွီးသိမျငယျခံစားရအောငျလုပျတယျ
*သငျပွောသမြှ သငျဖွရှေငျးသမြှကို လှောငျရယျရယျတယျ
*သူတို့ရဲ့ အမှားကို တာဝနျမယူ မဖွရှေငျးပဲ ဘာသိဘာသာနတေယျ
*ရနျဖွဈတဲ့အခါတိုငျး သငျနဲ့ခဈြသူဖွဈရတာပဲနောငျတရသလိုလို၊သငျက တနျဖိုးမရှိသလို ပွောဆိုဆကျဆံတတျတယျ
*ရနျဖွဈတိုငျး လကျပါတတျတယျ။ပွီးမှ ပွနျတောငျးပနျတယျ
ဒီလိုအခကျြတှထေဲက တဈခကျြခကျြမြား သငျ့ခဈြသူက သငျ့အပျေါအမွဲပွုမူနတေယျဆိုရငျ သငျတို့ရဲ့ အခဈြရေး ရှဆေ့ကျဖို့ကိုသခြောစဉျးစားသငျ့ပါတယျ။သငျ့ခဈြသူက ဒီလိုမြိုးအခကျြတှမေလုပျဘူးဆိုရငျတော့ သငျက ကံကောငျးတဲ့မိနျးကလေးတဈယောကျပါပဲ။ကိုယျ့အပျေါတကယျခဈြတဲ့သူ၊တကယျနားလညျခဈြမွတျနိုးတဲ့သူဆိုတာ ရနျဖွဈတဲ့အခြိနျမှာတောငျ ကိုယျနားလညျလကျခံလာတဲ့အထိပွောပွရှငျးပွတဲ့သူမြိုး၊သူတို့မှားရငျလညျးကိုယျကနြေပျတဲ့အထိ တောငျးပနျရှငျးပွတာမြိုးပါ ❤️
စိတ္တဇလူသတ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ ဟောလိုဝင်းည ” Hell Fest ” Trailer